ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » အဘယ်သို့ငါ, Conversation Dead Zone ကိုရှောင်ကြဉ်ပါနှင့်အပြင်ရှိလာကြောင်းတွေ့ရ၏ကြဉ်ရှောင်နိုင်?
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇန်နဝါရီ. 26 2020 |3မိဖတ်ပြီးသား
“ငါစကားစတင်ရန်ကြိုးစားနေကပ်ရ. Absolute ငြိမ်ဝပ်စွာနေအရူးငါ့ကိုအမောင်း. ငါသည်အများသောအားဖြင့်ကယ့်ကိုမိုက်မဲရာတစ်ခုခုဖြစ်ခြင်းတက်အဆုံးသတ်ဟုဆိုသောအဆိုပါရေခဲကျူး။” – anonymous
ငါတို့ရှိသမျှသည်အထံတော်၌ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ် – သင်ရုံတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်တွေ့ဆုံအဘယ်သို့ဆိုရန်မစိတ်ကူးရှိသည်င်သောအခါတွင်ဖြစ်ပွားကြောင်းကိုအဆင်မပြေငြိမ်ဝပ်စွာနေ…
ကိုယ့်စိတ်ကို၌ဤမြင်ယောင်… သင်သည်သစ်ကိုတစ်စုံတစ်ဦးကကျွန်တော့်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်နှင့်သင်ကောင်းတစ်ဦးပထမဦးဆုံးစိတ်စွဲမှတ်စေခြင်းငှါအဘယ်သို့ပြောအနည်းငယ်မသေချာသေး. ဒီတစ်ခါလည်းသင်အနည်းငယ်ရှက်တတ်ခြင်းနှင့်ဦးနှောက်အာရုံကြောတွေအများကြီးပါတယ်! ဒီတစ်ခါလည်းကိုသင်ရုံးမှာကြာမြင့်စွာသောနေ့ ရက်မှစ. ့ပင်ပန်းတဲ့. မည်သို့ပင်, သင်လုံးဝဖမ်းပါတယ်ဟုတစ်လုံးတည်းအသိဉာဏ်ရှိသောအရာ၏အထင်မခံနိုင်သည်. ပိုဆိုး, သင့်ရဲ့နေ့စွဲဖြစ်စေဘာမှမပြောဘဲမရ.
ဒါဟာင် “ပထမဆုံး DATE ဒီနေ့ရက်စွဲ dead zone!” – ကူညီကြပါ! တစ်စုံတစ်ဦးကတစ်ခုခုပြော… ဘာမှမ… လျင်မြန်စွာ!
မလုပ်ပါနှင့်, သင့်ရဲ့ဖက်စ်စက်ရိုးရှင်းစွာပထမဦးဆုံးရက်စွဲများတစ်ခုတည်ထောင်ခဲ့သည် protocol များရှိပါတယ်. နောက်ကျောကိုသင်တစ်စုံတစ်ဦးမှတစ်ဦးစာရွက်စာတမ်း faxed နောက်ဆုံးသောကာလမှစဉ်းစားပါ. သင့်ရဲ့ဖက်စ်စက်ကိုတခြားဖက်စ်စက်ကိုချိတ်ဆက်ဖို့ကို, စာရွက်စာတမ်းမှတဆင့်သွားစတင်သည်မီထိုအခါသင်နှင့် gibberish အမျိုးမျိုးကိုကြား.
သင်သည်အစဉ်အဆက်သောသူအပေါင်းတို့သည်အကြောင်းဘာစဉ်းစားမိခဲ့ပါ? ကောင်းစွာ, နှစ်ဦးဖက်စ်စက်တွေအခြေခံအားဖြင့်မင်္ဂလာပါဟုပြောဆိုလျက်နှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုရဲ့လေသံ setting နေကြတယ်, ဘယ်လောက်မြန်မြန်သူတို့စကားပြောတာပေါ့, သူတို့အသုံးပြုတဲ့အဘယ်သို့ဘာသာစကားသွားမည်, အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးသူတို့စကားပြောခန်းတာပေါ့. ဒါဟာသင့်ရဲ့နေ့စွဲနှင့်အတူသူများပထမဦးဆုံးမိနစ်အနည်းငယ်အလွန်ဆင်တူင်.
သင်သည်ဟာသ၎င်းတို့၏အသိထွက် figuring င် (အရာနှင့်သူ့ဟာသူလုံး​​လုံးဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုရဲ့လေသံကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်)
သင်သည်သူတို့၏ရည်ရွယ်ချက်များကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကြိုးစားနေပါတယ်. သူတို့ကယ့်ကိုရင်းနှီးဖော်ရွေ Are? သင်သည်ထိုသူတို့ယုံကြည်ကိုးစားနိုင်? ယုတ်သင်သည်မည်သည့်ထိခိုက်မှုမရှိအောင်လုပ်ဆောင်ပါ?
သင်ဟာသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရိုးရှင်းစွာပထမဦးဆုံးနေ့စွဲ protocol ကိုအကောင်အထည်ဖေါ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်.
အဘယ်အရာသူတွေကိုပထမဦးဆုံးမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းဆိုသည်ယ့်ကိစ္စမမှတ်မိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါဟာင်. အဘယ်အရာကိုအရေးကြီးကြောင်းကနဦးတည်ထောင်နိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်, အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အတူဖော်ရွေ connection ကို.
ဒီနေရာမှာအချို့ဆက်သွယ်ရေးများမှာ 101 ညာဘက်ခြေမရက်တွင်စတင်လာဆောင်မှာအဘို့အအကြံပေးချက်များ.
အကယ်စင်စစ်သူတို့၏စကားကိုနားထောင် – မျက်စိ၌သူတို့ကိုကြည့်ရှု (ငါဖြေရခက်ပါတယ်သိပေမယ့်သင်ကလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။)
အဲဒါအရမ်းကောင်းတယ်, ငါမူကားအဘယ်သို့ဆိုပါဘူး? တိုင်းအခါသမယတစ်စည်သွတ်ရေခဲကျူးရှိပါသလား?
သူတို့လုပ်ငန်းအကြောင်းမေးကြည့်ပါ… သူတို့ဘာလုပ်? သူတို့ဘယ်လိုကကြိုက်နှစ်သက်ကြပါ?
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်ကလေးသူငယ်များနှင့် ပတ်သက်. မေးမြန်းစုံစမ်းရန်. ဘယ်လောက်များ? အမည်များ? ခေတ်?
သူတို့အလုပ်လုပ်မယ့်တဲ့အခါသူတို့လုပ်ဖို့သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းဘာမှမရှိကြ? ဝါသနာ? အားကစားဆိုင်ရာ? etc.
အဲဒီအသံသည်မဟုတ်ဘဲယေဘုယျသိ, ဒါပေမယ့်ဒီရိုးရှင်းတဲ့မေးခွန်းတွေကိုနောက်ကွယ်မှစိတ်ကူးသင်သည်နှစ်ခုစလုံး၌ပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်အကြောင်းပြောနေတာအဆင်ပြေသည်ဟုယူဆသောအရာတစ်ခုခုကိုတွေ့ရှိဖို့ဖြစ်တယ်. မျှော်လင့်, သင်ဘုံ၌သင်ရှိသည်ရာအချို့တို့ကိုတွေ့လိမ့်မည်.
သို့သော်, သိပ်မြန်လွန်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးမရရန်အရေးကြီးသည် . Show ကိုစိတ်ဝင်စားမှု, နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့မေးခွန်းများမေး, ဒါပေမယ့်လည်းင်ရောက်ဖြစ်ပါဘူး. သင့်အနေဖြင့်အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုချွတ်တွှေချင်ကြပါဘူး.
ဒါဘာကြောင့်ကျနော်တို့ကိုပထမဦးဆုံးနေ့စွဲအပေါ်ကိုတက်အေးခဲပါဘူး? ကိစ္စတော်တော်များများအတွက်, ကမသက်မသာငြိမ်ဝပ်စွာနေ (မကြာခဏအချို့သောထိတ်လန့်စေနိုင်ပါတယ်သော), ကြောက်လပေါ်တွင်အခြေခံထားသည်. ဟုတ်ကဲ့, ကြောက်လန့်…
သင်တိုင်းအချိန်ကိုကယ်တင်လိမ့်မည်ဟုတစ်ဦးမှော်အတတ်ပုံသေနည်းမရှိပေမယ့်, သင့်ရဲ့ပြဿနာကိုအဖြေတစ်ခုရှိပါတယ်. သင့်ကိုဖြစ်စေနိုင်ဖြစ်အံ့သောငှါအနည်းငယ်ရိုးရှင်းသောနှင့်အထွေထွေသင်မေးနိုင်မေးခွန်းများကိုသို့မဟုတ်ချီးမွမ်းနှင့်အတူတက် လာ. ရန်သင့်ရက်စွဲမီအချိန်အနည်းငယ် ယူ.. စာရွက်တစ်ရွက်ကိုအပေါ်ကိုသူတို့ချရေးပါ. သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်သို့မဟုတ် မှစ. ခါးပန်း၌စက္ကူ၏အပိုင်းအစ Keep. သင်သည်သေချာပေါက်ကြည့်စရာမလို – ရုံသင်တို့နှင့်အတူအကရှိခြင်းကြောင့်သင်မှတ်မိရှိကူညီပေးပါမည်င်သည်ကိုသိ.
သင်တကယ်ဖမ်းရရင်, ထိုသန့်စင်ခန်းမှကိုယ့်ကိုယ်ကို excuse နှင့်သင့် cheat sheet မှာကြည့်ရှု. သင်သည် ပြန်. မလာတဲ့အခါ, အကယ်စင်စစ်သင်သည်အသင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာဂရုစိုက်တတ်တဲ့မေးခွန်းတွေရဲ့နဲ့ကိုယ့်ရက်စွဲကိုအထင်ကြီးလိမ့်မယ်.